31 | March | 2013 | Danya Wadi
U S သမ္မတဟောင်းဂျမီကာတာ ဧပြီ(၂) ရက်နေ့ မြန်မာပြည် လာမည်။ Jimmy Carter to visit Myanmar
By danyawadi March 31, 2013 Leaveacomment
Sunday | 31/03/2013 Rohingya News Agency (Mizzima): Former US President Jimmy Carter will come to Myanmar next week to explore ways to support the country’s ongoing democratic transition. Jimmy Carter is leading members of the Carter Center, an NGO that he founded with his wife, around the world to encourage democracy and human rights. He […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဘာသာ/လူမျိုး/နိုင်ငံရေးနှင့် တိုင်းပြည်အပေါ်ထားသည့် သာတူညီမျှ စိတ်ဓာတ်
Myo Myint (………..ထိုညီလာခံတွင်ပင် ဘာသာရေးကိုင်းရှိူင်းသည့် ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်သင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်း သည်။ ဤအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အောက်ပါအတိုင်းချေပပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂၁၊ နံပတ် ၇၊၄ သြဂုတ်၊ ၁၉၄၇- စာမျက်နှာ ၂၁ မှ) “… သည်မှာ ဆရာ ၊ ကျွန်တော်တို့က လူကြိုက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သည်လို မဟုတ်မဟတ် ကိုယ်ထင်ရာတွေလျှောက်လုပ်နေကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ မကြာမီပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သားပေါက်ဖြစ်သွားမှာဘဲ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အလောင်းဘုရားလက်ထက်ကတည်းက မူဆလင်တွေရှိတယ်။ ဘရင်ဂျီတွေရှိတယ်။ အစတုန်းကရှိ လာကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့တောင်တန်းသားတွေရှိတယ်။ အဲသည်တောင်တန်းသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တုန်းက တချို့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲနေကြတာရှိတယ်။ သူတို့တစ်တွေ ဟာအားလုံးနိုင်ငံသားတွေပဲ၊ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းကလွတ်အောင်တိုက်ထုတ်ကြတုန်းက ကျွန်တော်တို့ချည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့တတွေပါကြတယ်။ ယခု ကျွန်တွင်းက လွတ်မည်မကြံသေးဘူး […]
” အာဖ ရိကတိုက်က ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူ လူမျိုးစု နှစ်စု အပြန်အလှန် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင် ငံမှာ ဖြစ်နေပြီလို့ သတင်းဌာနတစ်ခုက ထုတ်လွှင့် ခံရလောက်အောင် ရှက်စရာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။” ======================== မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ ======================== စင်ကာပူကိုငါးကြိမ်မြောက် ဆေးစစ်ဖို့ ရောက်နေပါတယ်။ ဆေးစစ်အပြီးမှာတော့ မောင့်အယ်လိဇဘက်ဆေးရုံက အထူးကု သမားတော် သုံးဦးညှိနှိုင်းကြပြီး ကျွန်တော့်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု (Radiotherapy) ပြောင်းပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူချိန်မှာ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကီမိုဆေးသွင်းမှုကိုလည်း ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ယခု အစီအစဉ် အရဆို ရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ နည်းနည်း ကြာဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ၊ […]
Myanmar Online News ချွေးထွက်လွန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်နံ့နံခြင်း Saturday,March 30, 2013 ချွေးထွက်လွန်ပြီး ကိုယ်နံ့နံတဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင်သာမက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေပါ သင့်ကိုယ်နံ့ကြောင့် စိတ်မသက်သာ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နံ့ဟာ အစားအသောက် စားသောက် မှုပုံစံ ပြောင်းလဲတာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အချက်များ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးအသင့်အတင့်ထွက်ဖို့ လိုအပ်ပေမဲ့ ချွေးထွက်များတာကြောင့် ကိုယ်နံ့နံတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များတာကို Hyperhidrosis လို့ခေါ်ပြီး အောက် ပါ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ – မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပုံစံ၊ – တချို့သော ဆေးဝါးကုသမှု၊ – အမျိုးသားဟော်မုန်း(တက်စတိုစတီရုန်း) လျော့နည်းခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ – သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလုပ်လုပ်လွန်းခြင်း၊ – ငှက်ဖျားရောဂါ၊ […]
Myanmar Online News သစ် အလုံးလိုက် ပြည်ပတင်ပို့မှုခွင့် ရပ်ဆိုင်းမည် Saturday,March 30, 2013 ပြည်ပသို့ သစ် အလုံးလိုက် တင်ပို့မှုကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော ဝန်ကြီးဌာန မှတဆင့် ဆိုသည်။ “သစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သစ်အချောထည်နဲ့ တဝက်တပျက် အချောထည်အဖြစ်သာ တင်ပို့ခွင့်ကို ဝန်ကြီးဌာနက မတ်လ ၂၉ ရက် နေ့စွဲနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယင်းဌာနမှ တာဝန် ရှိ သူ တဦးက ပြောသည်။ ထို့သို့ ပိတ်ပင်ရခြင်းမှာ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် နိုင်ငံတော်၏ အဓိက သယံဇာတ တခုဖြစ်သည့် သစ်တော သယံဇာတများ […]
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သစ်ပင် (Manchineel) လူ တိုင်းကြောက် တဲ့ သစ်ပင်
Myanmar Online News ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သစ်ပင် (Manchineel) Saturday,March 30, 2013 ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သစ်ပင်လို့ အသတ်ခံထားရတဲ့ အပင်ကတော့ Manchineel အမည်ရ သစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅ မီတာအထိ ရှည်နိုင်တဲ့ အပင်မျိုး ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့ တောင်ပိုင်း ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ အတွေ့များပါတယ်။ ပင်လယ် ကမ်းခြေတွေမှာ ပေါက်တတ်ပြီး ရေတိုက်စားခြင်းကို အဓိက ကာ ကွယ်ပေး တဲ့ အပင်များ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ်ကလည်း တော်တော်ပြင်းပါတယ်။ သူ့မှာ ပေါက်တဲ့ အသီးဟာ ပန်းသီး ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ နီးစပ်ပြီး Manchineel Apple လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ ယင်းပန်းသီး တစ်လုံးဟာ လူ အယောက် ၂၀ […]
Myanmar Online News ကော်ဖီများများ သောက်ခြင်းက စိတ်ခြောက်ခြားစေ Saturday,March 30, 2013 ကော်ဖီများများ သောက်တဲ့သူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ပိုမို စိတ်ခြောက်ခြား တယ်လို့ ဆေးပညာ အရ လေ့လာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ စိတ်ခြောက်ခြားစရာ ပုံရိပ်များ၊ လူသေပုံရိပ်များ အလိုလို ပေါ်လာတာမျိုး၊ အသံများ ကြားနေရခြင်းမျိုး တို့ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယင်းလေ့လာမှု ကို ဗြိတိန်မှာ ကျောင်းသား ၂၀၀ အား လက်တွေ့စမ်းသပ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ရက်ကို ၇ ခွက်နဲ့ ညီမျှတဲ့၊ ပိုများတဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကိုနေ့စဉ် သောက်သုံးနေသူများ ကြုံတွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့က သာမန် ကော်ဖီသောက်သုံးသူများ (တစ်ရက် လျှင် တစ်ခွက် […]